Laga soo bilaabo maadada adduunka oo dhan waxay ahayd neefta arinta, maskaxda qarsoodiga ah, iyo iyada oo loo maro jinsi la muujiyey waxay ka heshay nafteeda kale dhexdeeda. Xagga jacaylka iyo allabaryada ayaa hadda ka hor qiray qarsoodiga: waxa uu helay, sida Masiixa, sida Ruuxu, isaga oo dhan wax kasta: I-aad-iyo-aad-art-I.
Vol. 2 NOVEMBER, 1906. No. 5
SOUL sida ay calaamad u tahay calaamadda hawo-mareenka hawadu waxay ku jirtaa diyaarad isku mid ah maraakiibta (gemini), laakiin farqiga u dhaxeeya horumarinta heerka ugu dambeeya waa mid aan la qiyaasi karin. Waa farqiga u dhexeeya bilawgii bilawgii ee midnimada, adduunka aan la socon, iyo helitaanka midnimada caqliga ee laba-laabnimada ee nafsadda.
Maaddadu waa unug aan asxan lahayn oo asal ah, oo bilawga ah ee kobcinta curyaaminta, oo neefsanaya (kansar) u muuqda, wuxuuna noqonayaa caalamyada muuqda oo aan la arki karin, dunida oo dhan iyo qaabab kasta. Ka dibna dhammaantood waa la baabi'iyaa waxaana ugu dambeyntii lagu xalliyaa (xayawaan) sheyga asalka ah ee rasmi ah (gemini), si mar kale loo neefsado una muujiyo mar labaad. Sidoo kale bilowgii noloshii dunida oo dhan, waxa aan u yeedhno nin ayaa neefta ka soocaya maaddaama ruuxa arxan-darrada leh, wuxuu u maleynayaa qaab muuqaal ah, haddii aanu helin dhimashada dhimashada noloshiisa, waxyaabaha uu ka kooban yahay waxaa lagu xalliyaa iyada oo loo marayo dowladaha kala duwan maaddada asalka ah ee adduunka ah in la neefsado ilaa uu ka gaadho dhimashada miyir-beelka ah, oo midoobaysa oo uu noqdo mid nafsiyan leh.
Marka walxaha la neefsado sida ruuxa arinka u galo baddaha nolosha, taas oo aan la arki karin oo aan lagu ogaan karin dareenka jireed, laakiin waxaa laga yaabaa in loo arko ficilladeeda dusha diyaaradeed, taas oo ah dareenka fikirka, (leo -Shabaab). Ruuxa waliba noloshiisa mar walbaa raadinaya hadal. Waxay gashaa qaababka aan la arki karin ee jeermiska, oo kor u qaadaya, ciriiri, oo iskudhafka iyo qaababka aan muuqan ee muuqaal ahaan. Waxay sii wadi doontaa in ay soo degto oo ay kordhiso qaabka horumarinta jinsiga, ugu muujinta dareenka ugu weyn ee adduunka ee muuqata. Iyada oo rabitaan jinsi ah ayaa loo hirgeliyaa heerka ugu sareeya, iyo ficilka neefta waxaa lagu farsameeyaa feker ahaan. Desire wuxuu ku sii jiri doonaa diyaarad u gaar ah oo ah diyaaradda qaababka iyo rabitaanka (scorpio-scorpio), laakiin iyada oo loo maleynayo in la bedeli karo, la bedeli karo lana kobciyo.
Soul waa erey loo isticmaalo hab aan kala sooc lahayn oo si ku meel gaar ah. Isticmaalka wuxuu tilmaamayaa in ay ahayd tayada aan qarsoodi lahayn ee u qalma oo midabo leh ka hor ama ka dambaysa; tusaale ahaan, nafta adduunka, nafta xayawaanka, nafta bini'aadamka, nafta nafta, nafta caalamka, nadaafadda. Nafo waxa ku jira wax walba waa arin, laakiinse wax waluba waa ka dhex milmaan ilaahyo kale. Qofku wuxuu ku jiraa xaalad kasta si buuxda oo ay ku habboon tahay in ay uur yeelato oo ay u aragto. Haddii ay si macquul ah loo isticmaalo, dhammaan isticmaalka guud iyo kuwa aan kala sooca lahayn ee loo adeegsanayo ereyga hadda la dhigo waxaa lagu fahmi karaa xaqiiqda. Sidaa awgeed marka aynu ka hadlayno nafta shakhsiyadeed, waxaannu ula jeednaa xitaa aabaha, xoogga, ama qaybta dabiiciga ah. Naftaada madhicin, waxaan u xushay qaabka, meco, ama magnetism oo haya ama ku midoobaya jajabyada ama waxyaabaha ay ka kooban tahay. Nafaqada nafleyda, waxaa loola jeedaa nolosha, jeermiska, ama unugyada kaas oo saameeya xoogagga qaabka iyo sababaha foomka si loo ballaariyo oo u koro si habboon qaabaynta. Waxaan ugu yeeraa nafta xayawaanka, rabitaanka ama tamarta ama dabka qarsoon, oo firfircoon ayadoo lala xiriirayo neefta, kaas oo ku wareegsan, degan, xakamaynta, baaba'a, iyo dib u soo celinta qaabkeeda. Nafta aadanaha waa magaca qaybtaas ama wajiga maskaxda ama shakhsi ahaaneed ama mabaadii 'i-am-I mabda' oo ku dhexjirta nin oo kufilmaamaya rabitaankiisa iyo foomamkiisa xakamaynta iyo bareerka. Naftii rabbaani ahaaneed waa mid caqli ah oo caqli ah, dhar, iyo gaadiidka joogtada ah ee Bilowga ah ee Bilaaban.
Soul maaha wax shakhsi ah inkasta oo ruuxu yahay dhammaadka iyo horumarka ugu sarreeya ee walaxda, labada dhinac ee isku midka ah ee diyaarad isku mid ah; naftu ma neefsanayso inkasta oo naftu ay ku dhacdo neefta barkada nolosha oo dhan; Naftu ma aha noloshii iyo inkasta oo ay ka soo horjeeddo nolosha (leo-aquarius) laakiin naftu waa mabda'a midnimo ee dhammaan muuqaalada nolosha; Naftu ma aha qaab, inkasta oo ay naftu la wadaagto dhammaan noocyada kale ee ay ku nool yihiin oo ay ku nool yihiin oo u guuraan oo ay leeyihiin. Soul maaha galmo inkasta oo naftu u adeegsato jinsiyada sida calaamadeeda, labadaba, iyo joogitaan ahaan asrogyne runtii qof kasta oo ka mid ah bini-aadamku wuxuu awood u siinayaa in maskaxda lagu dheellitiro oo loola simo jinsiga iyo xallinta jinsiga oo lagu xalliyo nafta. Soul ma rabto inkasta oo ruuxu yahay jacayl aan isku mid aheyn oo ah rabitaankeedu waa jawi aan caadi ahayn, xayawaan, dareemo, aan muuqan. Soul lama fekerayo inkasta oo naftu ay ka fakirto fikirka ah in laga fikiro dhammaan nolosha iyo foomamka hoose ee kor loo qaadi karo. Soul ma aha shakhsi ahaaneed inkasta oo ruuxu yahay xigmadda shakhsi ahaaneed oo u suurtageliya shakhsiyaadka inuu u bixiyo shakhsi ahaantiisa iyo inuu sii balaariyo aqoonsigiisa iyo inuu isu muujiyo shakhsiyaadka kale oo dhan, sidaas darteedna loo helo astaamaha ugu wanaagsan ee jacaylka uu qofku rabo.
Soul waa mabda 'caqli-garasho leh kaas oo farageliya, xiriiriya, oo wuxuu la xiriiraa atom kasta oo caalami ah oo lala wadaago atom kasta oo kale iyo dhammaanba. Maaddaama uu xiriir la leeyahay oo la xidhiidha jilayaasha oo ku saabsan mashaariicda horumarinta miyirka, macdanta, khudradda, xayawaanka, iyo boqortooyooyinka aadanaha, sidaas awgeed waxay sidoo kale la xidhiidhaa boqortooyooyinka aan la arki karin, adduunka adduunka, iyo mid waliba oo dhan.
Nolosha aadanaha waa nafsadda aadanaha, miyir-qabka taas oo ka dhigaysa jaceylka adduunka oo dhan iyo nafta bini'aadamka Masiixa. Soul waa mabda'a miyir-qabka ah oo dhiirrigeliya murugada, nasashada, daalinta, iyo caqliga kuwa caqliga leh, iyo kuwa nabadda jecel. Soul waa mabda'a miyir-qabka ah, ilaahiga miyirka ee miyirka. Qalbigaa waa wax walba oo miyir leh, laakiin miyir-beelka oo kaliya ayaa laga yaabaa inuu noqdo is-dareen iyo naftiisa. Qofku waa mabda'a jacaylka caalamiga ah, oo dhammaantoodna la joogteeyo.
Soul waa qaab la'aan. Waa isku mid sida Masiixa iyo Masiixu wax foom ah ma laha. "Masiixa" waa Ruux oo ka shaqeynaya shakhsiyad khaas ah.
Maqnaanshaha joogitaanka nafta, jaahilnimada iyo dabeecada iyo caqliga ayaa ka soo horjeeda xitaa iyada oo ilmuhu uu ku dhibtoonayo dadaalka hooyadeed si loo yareeyo. Si kastaba ha ahaatee naftu waxay u dhaqmaysaa si tartiib ah dhammaan kuwa ka soo horjeeda sida hooyo leh cadhada indhoolaha ee ilmaheeda.
Marka jaceylku u qoro jacaylka u keenaya nin ama naag si uu naftiisa ugu bixiyo isaga oo jecel, labadaba dhalinyarada iyo gabadha labadaba waxay ku faraxsan yihiin oo ay ka muuqdaan akhrinta. Waayeelkii hore waxay ka fekeraan xoogga iyo sarraynta dabeecada geesiga. Labada jir iyo waayeelba waxay ka fekerayaan oo isku xirnaan doonaan dabeecadda. Laakiin markii sajilku qoro jacaylka Masiixa ama qofkasta oo kale "badbaadiyaha dunida" inuu naftiisa u huro si uu u jecel yahay-dhallinyarada - gabadhuna waxay gariiri doonaan fekerka waxayna u tixgelineysaa sida mawduuc ay u noqonayaan kuwa la isku afgaran waayey , ama kuwa daalan ama noloshooda, markay dhimanayaan. Dadka gaboobay waxay ka cabsadeen oo ay u maleynayaan badbaadiyaha diinta diinta, laakiin dhalinyarada iyo waayeelku midkoodna iskuma xiri doono ficilka ama kii sameeyay, marka laga reebo inay rumaysato oo ay faa'iido ficilka "badbaadiyaha." jacaylka ama is-xishoodka jacaylka uu jecel yahay ama hooyada ubadkeeda, waa isla mabda'a, inkasta oo aan si ballaaran loo ballaarin, taasoo Masiixa ka dhaadhicisa shakhsiyadda iyo in la kordhiyo shakhsiyaadka ka soo jeeda xuduudaha xadidan shakhsi ahaan iyo guud ahaan bani-aadmiga. Jacaylkan ama ficilku ma aha mid ka mid ah waayo-aragnimada ninka caadiga ah ama dumarka, sidaas darteed waxay u arkaan inay tahay mid aad u sarreeya oo ka baxsan, oo aan ahayn noocooda. Noockoodu waa jacaylka aadanaha ee ninka iyo naagta iyo waalidka iyo ilmaha iyo allabariga iyo midba midka kale. Self-sacrifice waa ruux jacaylka, iyo jecel yahay farxad leh in allabari maxaa yeelay iyada oo loo marayo allabaryo jacaylku wuxuu helaa muujinta ugu fiican iyo farxad. Fikraddu waa mid isku mid ah, farqiga udhaxeeya lammaanaha iyo hooyadu waxay u dhaqmaan si aan fiicnayn halka Masiixu u dhaqmo si macquul ah, jacaylku waa mid aad u ballaaran oo aan aad u weyneyn.
Ujeedada ah in la dhiso shakhsiyadeed, waxaan ahay, waxaan kor u qaadayaa arimaha dawlad goboleed oo ay tahay in uu naftiisa iyo aqoonsigiisu yahay shakhsiyadeed, taas oo ujeeddadeedu tahay horumar. Marka shakhsiyaadka la gaaro, markaa dareenka naftiisa ayaa u adeegsaday ujeeddadana waa in laga tagaa. Mawduuca ruuxu maaha mid ka baxsan ruuxa. Waxay ku midoobeen hal maado, haddaad miyir qabtid adiga iyo adiguba waad tahay. Waxaa jira gacankudhiiglaha, iyo gacankudhiiglayaasha, iyo kuwa sinaysta, iyo saaxirka, iyo nacasyada, iyo nacasnimada. Taas oo ka dhigaysa mid waa Masiixa, Soul.
Xoog-saaraha naftiisa waa jacayl. Waxaan ka adkaannaa is-dulqaadashada jacaylka. Jacaylka jacaylka, jacaylka bini'aadamka, ee adduunka yar yar, waa gardarada jacaylka Masiixa, Soul.
Qofka ugu horeeya wuxuu ku dhawaaqayaa joogitaanka ninka sida niyadda, codka kali ah. Codka kaliya ee ku jira codad badan oo adduunka ah ayaa isaga ka dhigaya inuu falalka isdaba-joogga ah ka dhex abuuro isaga oo is wehesho isaga oo la socda nin. Haddii codka kali la raaco marka la dareemo waxay ku hadli doontaa ficil kasta oo nolosha ah; naftiisa ayaa markaa muujin doonta isaga oo u maraya codka bani-aadmiga isaga oo ah nafta bini'aadamka, walaaltinimada caalamiga ah. Isagu markaas walaalkaa wuxuu noqon doonaa walaal, ka dibna waan ogaan doonaa aniga iyo adiguba inaan miyir beelay, oo noqdo "badbaadiyaha dunida," oo midkiina naftaada ha ahaado.
Inay noqoto mid miyir-beel ah waa in la sameeyaa inta shakhsi ahaaneed uu ku jiro jidh bani-aadmi ah oo ku nool dunidan jireed. Laguma sameyn karo dhalashada ka hor ama ka dib dhimashada ama ka baxsan jirka jirka. Waa in lagu sameeyaa jirka dhexdiisa. Mid waa inuu naftiisa ku dareemaa jirkiisa jirka ka hor inta aan si buuxda loo garan karin jidhka jirka. Tan waxaa loo gudbiyay tifaftirka dhibaatada "Sex," (libra). (Eeg Word The, mugga 2, No. 1, p. 4.)
Waxaa la sheegay macallimiinta weligood ku nool, iyo qoraallada qaarkood, in ruuxa uu rabo, wuxuu uqorshaa inuu muujiyo naftiisa. Tani waxay ka dhigan tahay in kuwa kaliya ee uqalma kuwa jidhka, maskaxda, maskaxda, jidh ahaaneed, iyo waqtiga saxda ah, naftu waxay noqon doontaa mid loo yaqaano waxyiga, iftiinka, dhalashada, baabtiiska, ama iftiiminta. Ninku wuxuu ku noolyahay oo uu miyir qabo nolol cusub iyo shaqadiisa runta ah, wuxuuna leeyahay magac cusub. Sidaa darteed waxay ahayd markii Ciise la baabtiisay-oo ah in la yiraahdo, marka maskaxdii maskaxdu si buuxda loo soo dhejiyo-wuxuu u yimid oo loogu yeedhay Masiixa; dabadeed wuxuu bilaabay adeeggiisa. Sidaas oo kale waxay ahayd in Gautama uu ka fekerayay geedkii Bo Bi'ir-geedkii xayawaanka ee jidhka-inuu iftiimiyay. Taasi waa in la yiraahdo, naftu waxay isaga u muuqatay isaga, isaga oo loo yaqaan "Boodda, nuurka, oo wuxuu bilaabay adeeggiisii ​​ragga.
Mararka qaar noloshiisa qofku waxa uu ka fiicnaadaa miyir-beelka miyir-qabka ah, laga bilaabo arrimaha yar-yar ee nolosha adduun-nololeed ee adduun-maalin-nololeedka adduunyada gudaha adduunka kaas oo soo baxa, hareereeya, taageerana, kuna fidsan dunidan saboolka ah ee liita. In neefta, marka ay timaaddo, isla markiiba, waqtigu wuu joogsanayaa adduunkani wuxuu ka furan yahay gudaha. Wax badan oo ka badan qurxiyo badan ayaa u furan iftiinka iftiinka oo aan indhoole ahayn ama gubi. Dunidu waxay la socotaa bakhaaradeeda joogtada ah, qaaradaha soo koraya, ganacsiga ciriiriga ah, iyo jilbadaha midabada badan ee muraayadda; Beertiisa cidlada ah, waxay u baxday beeraha dhexdooda, Buuraha dushooda ku wareegsan ee daaha laga qaaday; iyo hadhuudhka, iyo shimbiraha, iyo dugaagga dhulka, hoolalka sayniska, raaxaysiga, cibaadada; dhammaan foomamka qorraxda iyo dhulka iyo dayaxa iyo xiddigaha ayaa la beddelay oo ammaanaya oo quruxbaxaya quruxda ba'an iyo iftiin aan iftiin ahayn oo ka soo baxa dhamaanba gudaha maskaxda gudaha. Dabadeedna, xayawaanka yaryar ee cadawga, nacaybka, masayryada, waxyeellada, sharafka, cibaadada, rabitaanka dunidan ayaa ka baxsan jacaylka iyo awoodda iyo xigmadda ee xukunka ku leh maskaxda, gudaha iyo dibadda. Qofka maanka ku haya waa inuu dib u soo celiyaa marba marka ka dambeysa. Laakiin wuxuu arkay iftiinkii, ayuu isqariyey xooggii, ayuu maqlay codkii. Inkastoo aan weli la sii daayay, haddana kama sii qoslayn, oo ha isku dhufanin, isla markaana xajin karo iskutallaabta birta ah, inkastoo laga yaabo inuu ku dhejiyo. Isagu waa inuu sii noolaado meelo daaqo ah iyo meelo dhagax ah oo dhulka ku yaalla daaq iyo caleemo cagaaran. inuu ka soo bixiyo hooska dhimashada, iyo waxa bogga ku gurguurta, iyo inuu iyaga u sakhraamo si ay u iftiimiyaan oo ay u adkaystaan ​​nuurka; inay caawiyaan kuwa carrabka la'aha leh oo hoos u eega, oo gacmahooda iyo cagahooda iyo dhulkiinnaba ku dhex socdaan xagga iridda, oo xagga qorrax ka soo baxa, noloshiisa si ay u heestaan ​​heesaha nolosha ee adduunka; si loo fududeeyo culaysyada; oo u naxariista kuwa isaga jecel oo amarradiisa xajiya. si ay u siiyaan waqti-isku-duubayaasha oo heesaya heesaha waqtiga ee fiiqan iyo degaan xannuun iyo raaxaysi, iyo kuwa isku jiidaya iskutallaabta birta wakhti, gabay cusub oo cusub ee nafta: jacaylka naftiisa . Sidaas ayuu ku nool yahay si uu u caawiyo dadka kale; iyo sidoo kale inta uu nool, dhaqdhaqaaqa, iyo jacaylka aamusnaanta, wuxuu ka adkaadaa noloshiisa isagoo fikradda, qaabka aqoonta, jinsiga xagga xigmadda, rabitaanka doonista, iyo, inuu helo xikmad, wuxuu naftiisa ka bixiyaa allabariga jacaylka iyo ka dhaafsigiisa noloshiisa nolosha nolosha oo dhan.
Ka dib markii ugu horeysay ee uu arko nalka iyo dareemo awoodda iyo maqalka codka, midna marnaba marnaba u gudbi doonaa maskaxda. Wuxuu noloshiisa ku noolaan doonaa nolol badan, noloshiisana way u socon doontaa si aamusnaan ah oo aan la garaneynin waddada qaababka illaa illaa ficilkiisa aan qarsoodi ahayn uu sababi doono marxaladda dhabta ah si uu uga furo gudaha marka uu mar kale heli doono jacayl aan qummanayn, awoodda noolaanshaha , iyo xigmadda aaminka ah. Dabadeedna wuxuu raaci doonaa kuwa aan dhiman ee horay u soo safray waddada miyir la'aanta.